R/wasaaraha oo bari looga yeeray | KEYDMEDIA ONLINE
R/wasaaraha oo bari looga yeeray
Garoowe (Keydmedia) - Ra’ isal Wasaaraha Somaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaaz ayaa gaaray Magaalada Garoowe ee Maamulka Faroole, Waftiga Gaaz waxa ka mid ah Rag kale oo kasoo jeeda deegaanka Garoowe oo Ra’isal wasaaraha ku weheliyay safarkiisa.
Hogaamiyaha Garoowe Cabdiraxman Faroole ayaan isagu goobjoog ka ahayn soo dhowaynta Ra’isal wasaaraha midaas oo lagu sabab beeyey inuusan raali ka ahayn qaabka uu u shaqaynayo Ra’isal Wasaaraha oo uusan Faroole la dhacsanayn.
Ra’isal Wasaaraha ayaa inta uu jooga kala hadli doona Cabdiraxmaan Faroole iyo kooxdiisa inay ka qayb galaan Shirka Wadatashiga dhinacyada Soomaalida oo bisha inagu soo aadan lagu wado inuu ka furmo Magaalada Muqdisho.
Faroole iyo kooxdisia ayaan ku qanacsanayn ka qayb galka shirka maadama ay u suura gali weyday in ay shirka ku qabtaan Garoowe, midaas oo Somalidu Badankeeda kasoo hor jeesatay.
Dhinaca kale Mudane Faroole iyo Kooxdiisa ayaa ka biyo Diidsan Xubnaha kasocda Bulshada SSC ee kusugan Magaalada Muqdisho kuwaas oo shirar iyo wada hadal la leh Xubnaha ugu sar sareeya ee Dowlada KMG, Maamulka Garoowe oo caadaystay in magaca Shacabka SSC ay Manfac iyo Dheef ku raadsadaan , Dhibkeedana u dhafaan bulshada SSC, ayaa had iyo jeer lidi ku ah horumarka iyo isku duubnida Bulshada SSC , iyagoo curyaamiya talaabo kasta oo Bulshada SSC damacdo inay hore ugu talaabsato.
Sii deynta dadkan ayaa timid kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo gumaadka Ciidanka Kenya ay ku hayaan shacabka gobolka Gedo.